Sida loo kiciyo saameynta weyneynta astaamaha Dock | Waxaan ka socdaa mac
Sida loo kiciyo saamaynta weynaanta calaamadda 'Dock' iyadoo la adeegsanayo toobiye kumbuyuutar
Maanta waxaan maalinta ku dhammeyneynaa xeelad lagaa yaabo inaadan waligaa isticmaalin. Sidaad ogtahay, mid ka mid ah astaamaha nidaamka qalliinka tufaaxa qaniinyada waxaa ka mid ah inuu miis dul yaal desktop-ka weligiis loo yaqaan. Dock halka ay ku taallo astaanta Raadiyaha iyo astaamaha barnaamijyadaas inaad si joogto ah u isticmaasho.
Sidaad horeyba u ogayd, habdhaqanka Dock-ka waxaa lagala soo bixi karaa Nidaamka Xulashooyinka iyo mid ka mid ah ficillada aan ku dhaqaajin karno ama aan ku sii socon karno waa weynaanta astaamaha marka aan dul dul wareegeyno. Si kastaba ha noqotee waxay noqon kartaa saameyntan way nagu dhibtaa munaasabadaha qaarkood sidaa darteed waa iska caadi inaad ka joojiso.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa ay tahay inaad sameyso si aad awood ugu yeelatid inaad daqiiqad dhaqaajiso saameynta weyneynta ee Dock waqtiyo gaar ah. Sidan oo kale Dock ma yeelan doono animation si firfircoon u shaqeynaya iyo marka aan u baahanahay inaan sameyno weyneyn gaar ah si aan ugu xulanno codsi qaab fudud waxaan isticmaali doonaa toobiye kumbuyuutar.
Talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u adeegsato toobiye kumbuyuutarka aan ka hadlayno waa:
Marka hore waa inaan hubinno taas Xulashada Nidaamka> Dock waxaan dhaqaajinay saameynta weyneynta.
Hadda waxaan u guureynaa bar-xiraha xayeysiinta ugu sarreysa uguna dambayno iyada oo la joojinayo xulashada weynaanta.
Laga bilaabo xilligaas saamaynta weyneynta Dock ma noqon doonto mid firfircoon waana hadda markii ay tahay inaad isticmaasho toobiye kumbuyuutarka si aad ugu hawlgeliso waqti ku habboon. Saamaynta si loogu hawlgeliyo toobiye kumbuyuutarka waa inaad riixdid furayaasha SHIFT + ctrl ka dibna ku dul wareego Dock-ka. Waxaad arki doontaa sida saameynta weyneyntu u shaqeeyso si ku-meel-gaar ah adoo furayaasha hoos u haya.
Hadda waad hagaajin kartaa cabbirka Dock-ka ugu yar si aad uga faa'iideysato booska desktop-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sida loo kiciyo saamaynta weynaanta calaamadda 'Dock' iyadoo la adeegsanayo toobiye kumbuyuutar
HELLO, aad ayaad ugu mahadsantahay sharraxaadda naga caawineysa inaan si fiican u fahanno oo aan u adeegsanno macmaalkeenna, waan sameeyay wax kasta oo aad ii sheegto oo astaamaha markabku wali way taagan yihiin, kumana kordhayaan cabirka markay fulinayaan amarka inta lagu jiro ama kahor ama ka dib, waxaan ka baqayaa inay dhici karto inaan darawal ka fuulay ama aan tirtiray codsi loo baahnaa, waxaan sugayaa tilmaamo cusub maxaa yeelay haddii aan jeclaan lahaa inaan ka soo ceshado hantidan ama saamayn ku yeelato macbookkayga.
Kujawaab MARTHA MEJIA
15-ka cusub "MacBook Pro Retina waa midka kaliya ee hada taageera qaraarada 5k
Xaqiiqooyin cusub oo ku saabsan Apple TV-ga qulqulaya